Apple CarPlay waa iPhone-aragnimo ugu fiican oo laga heli karo ee baabuurta cusub ee 2014, CarPIay yahay, hab xariifnimo nabadgelyo badan inaad isticmaasho aad iPhone gaariga.
Goolkiisii ​​ugu weyn ee Apple ayaa la abuuro CarPlay waa in ay si buuxda waayo aragnimadiisa macruufka ah galay gaari. Waa maxay sababta? In ay helaan wax kasta oo aad u jecel yihiin ee ku saabsan iPhone marka aad gaadhiga waddo Waxaad heli kartaa. Tani waxaa ka mid ah fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda, music, khariidado, iyo wax ka badan. Oo wax oo dhan la Apple ee Siri shaqeeyaa
Qaybta 1. Waa maxay Waxyaabaha Ma CarPlay Waxaad u
Qaybta 2. Waa kuwee iPhone CarPlay taageero noocyo
Qaybta 3. Sida loo hagaagsan iPhone in gaariga ay Isticmaalka CarPlay
Qaybta 4. Waa kuwee Baabuurta Support CarPlay
CarPaly caawiyo inaad sameyso waxa aad rabto halka baabuur wadista.
1. theme aasaasiga ah ka dambeeya CarPlay waa in ay isticmaalaan dhammaan hawlaha iPhone aan taabashada iPhone marka aad gaadhiga waddo.
2. Waxaad samayn kartaa calls, heli tilmaamaha, iyo muusiko dhegayso, iyo in ka badan. CarPlay siin doonaa wadayaasha ah macruufka-sida interface yaqaan, halkii ay ku qasbaya inay bartaan UI kala duwan mar kasta oo ay heli isteerinka gaariga cusub.
3. Hadda aad iPhone guriga aad baabuur wadi karto adigoo isticmaalaya CarPlay. App Apple Maps yimaadaan si aad muraayada baabuurta iyo hanuunin jeedo by tilmaamaha jeedo, La soco xaaladaha gaadiidka, iyo waqtiga safarka lagu qiyaasay.
4. CarPlay sidoo kale qeexi karaa meesha aad u socoto adigoo isticmaalaya cinwaanka ka email, fariimaha qoraalka iyo Calendar.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la gaari noqon doonaa sida ugu fudud ee aad deeruhu cable USB galay iPhone iyo isku xira darafka kale dekedda USB ee baabuurka.
Tallaabada 2. Marka aad baabuurka lagu ogaadaa in aad iPhone ayaa ku xiran, CarPlay doono si toos ah u furan.
Tallaabada 3. Waxaad markaa dooran kartaa in aad u kala bedesho CarPlay iyo interface ka qoreen wargeysyada hooyo ee gaariga ee doorataa icon ku haboon ka menu CarPlay ah.
Sidee loo midaysan Siri?
Kaaliyaha dalwaddii Apple ayaa waxaa kasoo muuqday si cad gudahood CarPlay. Waxaad heli kartaa Siri adigoo riixaya badhanka cod-control gaariga. Waxaad weydiin kartaa Siri muusikada ciyaaro ka fanaaniinta jeceshahay, barnaamijyadooda CarPlay furan, taleefan oo meel, cid dir oo soo jawaabtid fariimaha iyo kor eega tilmaamaha. Ujeeddadu waa in la yareeyo xaddiga waqtiga aad doonaa sameysid eegaya in-dumisaan bandhigay baabuurka.
CarPlay waxaa ku wadhfin kareen on xushay 2014-baabuurka Baabuur Model ka Ferrari, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz oo Volvo. Automakers dheeraad ah ayaa ka go'an in ay taageero CarPlay in lagu daydo mustaqbalka, sida BMW, Chevrolet, Ford, Jaguar, KIA, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA Peugeot Citroen, Subaru, Suzuki iyo Toyota.
Waxa kale oo laga yaabaa in automakers qaarkood waxay bixiyaan qalabka aftermarket in la sameeyo baabuurta CarPlay socon. Ilaa hadda, Mercedes-Benz waa soo saaraha kaliya si ay u muujiyaan in ay ka shaqaynayso keeno CarPlay baabuurta ka weyn dhammaadka sannadka.
Best iPhone Transfer Tool Waxaad u
Top 17 Apps on iPhone
1 Click to Copy BlackBerry si iPhone
1 Click si ay u gudbiyaan Samsung si iPhone
A Guide Full in ay tirtirto Everythong on iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan iPhone si Car